Tsy sirianina hoy aho ny resaka - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Dia isan’ny namoaka ny eritreriny ny poety. Ireo efa mahazatra antsika teto no nangalana ny sangan’asany. Tsy fiangarana fa efa fantatra izy ireo.
Dia hoy i Baritafika any lavitra any hoe “Very letsy ialahy”
No ho tafavoaka raha izao no iainanay ?
Hitsahina, potehina... tsy avela raha tsy ho lo
Handray ny hafa ve, fa ny an'ny tena avela ho faty ?
Mosary sy kere, sa izahay natao hihafy ?
Tsy ho tompon-tany intsony fa ho mpindrana ihany sisa
Ampian'ny fahantrana, sa misy mafy ankoatr'izany ?
Baritafika September 5th 2017
Isan’ny nanome ny heviny koa i Olivier Randrianatoandro.
HIVAVAKA HITSINGOLOKA DAHOLO VE NO HIAFARANY,
TSY AFAKA AHO HOY RAMADA ZAY.
Hanainga handeha aho ho any zeparsa
Fara fahatarany ny volana Marsa
Fa i Gasikara hono ho fenoina syrianina
Hanamainty molaly koa ny afrikanina
Ny taninay bodoin’ny sinoa
Ny trano moa efa an’ny karàna
Lanin’ny sinoa hatramin’ny amboa
Rava tanteraka ny eto an-tanàna
Ny ombinay efa tapitra voaondrana
Sendra izay olona manondratsondrana
Tapitra lasa avokoa ny fananako
Ho entiko hitsoaka ny vady aman-janako
Ela tokoa no naha tany ny tany
Fa mbola tsy nisy ny ohatr’izany
Rava sy potika sady mibanaka
Tsisy antenaina ho an’ny taranaka
Milaza an-gazety tsy ahavaha inona
Izay rehetra mitaky atao tsinontsinona
Sendra izay olona lohan’ampondra
Aleoko mandeha raha ireo no mpitondra
Nijoro ho niseho tia tanindrazana ny maro. Saika izy rehetra. Mandavan-taona anefa tsy tazana ry zareo na ndeha atao hoe ny ankamaroan-dry zareo. Izany no nangalana ity sangan’asa ity izay manafatra. Araho anie…
Ho any ianao k'izao
ny dindon'ny tantara
taona maro izay...
toeram-piokoana, nitakiana zo
hitaky fahafahana tsy manam-paharoa
toera-nifaharan'ny gasy maro be
mitady fanovana ho amin'ny tena tsara
nananganan-tsaina sy nivarotan'aina...
kanefa koa toeran'ny mpilalao vahoaka
s'ireo malama vava, mpanao sarontava
toeran'amboadia mitafy zanak'ondry
mpamely diamanga sy donan'ny komondry
ianao no he badenina, f'izy efa mitsoaka...
ho any angamba ianao
hamantatra ny endrik'ireo mpitari-tolona
mahay mampanantena ny ampitso hamololona...
izaho tsy hoe mandrara na mampisalasala
izaho tsy mampirisika anao raha te hisisika
fa mba te hanafatra
sao faty miampatrampatra
no hitranga eny,
izaho izay efa niteny !
andy Rebabe / 19 aogositra 2016
Eny ho safotry ny vahiny isika rehefa maro izy ireo no indray tonga. Kanefa moa va tsy efa safotra isika na vitsy an’isa aza izy ireo ? Moa tsy vitsy an’isa fa manana ny lakilen’ny fiainana ry zareo ireo ? Sinoa, Karana, Vazaha no mibaiko ny toekarena. Ny Gasy ? Mpanatanteraka. Very tanteraka. Tendrom-po tsy mba namana no hita fa izay tena hanangana sy hiary tsy miseho.
Araka ny sary nampanarahana izao lahatsoratra izao dia tsy voatonona tao ny hoe hangatahana handray sirianina na mpitsoa-ponenana avy amina firenen-kafa i Madagasikara. Safobe mantsina ilay fangatahana. Niteraka zavatra mantsina avy eo. Mba avy aiza ary re no nipoiran’ilay resaka hoe handray sirianina e ? Avy any Torikia ve ? Esy aho e ry mpilaza vaovao… Asa sarotra e. Mankahery fa ny ahy dia ny mitatasiaka no aiko.
Soava herinandro indray dia samia velon’aina amin’ny Talata indray. Ny akamanao Ratalata ihany.